काँग्रेस सभापति देउवा ४० औं प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का, बने एक्लो उम्मेदवार
२०७४ जेठ २० शनिबार, काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा नेपालको ४० औं प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का भएको छ । शनिबार अपराह्न ४ बजेसम्म व्यवस्थापिका संसद् भवन नयाँ वानेश्वरमा मनोनयन दर्ता गर्न तोकिएको मिति भित्र देउवाको मात्रै आवेदन परेपछि उनी निर्विरोध प्रधानमन्त्री बन्ने पक्कापक्की भएको हो । ... बाँकी अंश»
भरतपुरको १९ नं वडामा पुन: मतदान गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय
२०७४ जेठ २० शनिबार, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले भरतपुर महानगरपालिकामा पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ । शनिबार बसेको निर्वाचन आयोगको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको आयोग निकट स्रोेतले जानकारी दियो । ... बाँकी अंश»
प्रधानमन्त्रीमा देउवाको उम्मेदवारी दर्ता, प्रचण्ड प्रस्तावक
२०७४ जेठ २० शनिबार, काठमाडौँ । नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आज व्यवस्थापिका–संसद्, सचिवालयमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । ... बाँकी अंश»
प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनः देउवाको प्रस्तावक–समर्थकमा प्रचण्ड र रामचन्द्र
२०७४ जेठ २० शनिबार, काठमाडौं । नयाँ प्रधानमन्त्री पदका लागि नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रुपमा उठाउँदै छ । ... बाँकी अंश»
एमालेको विगत : काँग्रेसलाई हराउन मतपत्र च्यात्नेदेखि निल्नेसम्म !
२०७४ जेठ १९ शुक्रबार, काठमाडौं । अहिले भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरका उम्मेदवारको मतपत्र च्यातिएको विषयमा देशभर हंगामा मच्चिएको छ । यही विषयलाई केन्द्रीत गर्दै एमालेले संसद् पटकपटक अवरोध गर्दै आएको छ । कहिले बजेट रोक्ने धम्की दिन्छ त कहिले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन नै हुन नदिने चेतावनी दिइरहेको छ । ... बाँकी अंश»
भरतपुर काण्ड : निर्वाचन आयोग कमजोर घोडा जस्तै लाचार, बुइँ चढ्न पल्केका दलहरुको रजाईँ
२०७४ जेठ १९ शुक्रबार, काठमाडौं । भरतपुर महानगरको मतगणना विवाद लम्बिनु र निर्वाचन एवं लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति नकारात्मक भावना जागृत हुनुको मूख्य दोषी निर्वाचन आयोग ठहरिने बताइँदै छ । ... बाँकी अंश»
आफ्नैले थर्काए देउवालाई, पार्टीको भविष्य नसिध्याउनुस्
२०७४ जेठ १९ शुक्रबार, काठमाडौं । नयाँ सरकारको नेतृत्व दौडमा रहेका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पार्टीको भविष्य जोखिममा नपार्न सुझाव आउन थालेका छन् । ... बाँकी अंश»
'देउवावाहेक कांग्रेसबाट जोसुकै प्रधानमन्त्री भएपनि एमालेले समर्थन हुन्छ'
२०७४ जेठ १९ शुक्रबार, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता शंकर पोखरेलले कांग्रेस–माओवादी केन्द्रवीचको गठबन्धनबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबाहेक अरु जो आएपनि प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले समर्थन गर्ने स्पष्ट पारेका छन् । ... बाँकी अंश»
' औषधी अभाव हुन्न, एक बर्षलाई पुग्ने औषधी र ९० दिनलाई पुग्ने कच्चा पदार्थको मौजात '
२०७४ जेठ १९ शुक्रबार, काठमाडौं। नेपाली औषधी उत्पादकहरुसँग एक बर्षसम्म पुग्ने औषधी मौजाद रहेको र कम्तिमा ९० दिनलाई पुग्ने कच्चा पदार्थ समेत रहेको नेपाल औषधी उत्पादक संघले प्रष्ट पारेको छ। कुनै विशेष औषधीको माग भएको अवस्थामा कुनैपनि औषधीको अभाव नहुने प्रतिवद्धता समेत संघले व्यक्त गरेको छ। केहि सञ्चार माध्यममा १५ दिनपछि देशैभरि औषधीको अभाव हुने आसयका समाचार आए लगत्तै बसेको औषधी उत्पादक संघको आकस्मिक वैठकमा सहभागि औषधी उत्पादकहरुले औषधीको कुनै अभाव नहुने र औषधी उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थको पनि अभाव नहुने प्रष्ट पारेका हुन्। ... बाँकी अंश»
राप्रपाको स्याङ्जा जिल्ला अध्यक्ष सहित २५९ जनाले छाडे पार्टी
२०७४ जेठ १९ शुक्रबार, स्याङ्जा । स्याङ्जामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट एकै पटक जिल्ला अध्यक्ष गणेश वहादुर गुरुङ् सहित २ सय ५९ जना जिम्मेवार नेता तथा कार्यकर्ताहरुले राजीनामा दिएका छन् । राजीनामा दिनेमा जिल्ला उपाध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिल्ला सदस्य, यूवक संगठनका अध्यक्ष, क्षेत्रीय सदस्य, वडा अध्यक्षदेखि जिल्ला सचिवसम्मका छन् । ... बाँकी अंश»
कपिलबस्तुमा काँग्रेसले छान्यो समावेशी उम्मेदवार, ४ नगरपालिकामा को-को ?
२०७४ जेठ १९ शुक्रबार, कपिलवस्तु । नेपाली काँगे्रस जिल्ला कार्य समिति कपिलवस्तुले आगामी असार १४ मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको लागी ४ नगरपालिकामा मेयरको टुङ्गो लगाएको छ । जिल्लाका नेताहरुको बैठकले उक्त ४ नगरपालिकाकामा मेयरको लागि उमेदवारी छनौट गरेका हुन । ... बाँकी अंश»
तिलोत्तमा नगरपालिकामा एमालेको बागी उम्मेदवार
२०७४ जेठ १८ बिहिबार, बुटवल। रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा एमालेले दिएको टिकटप्रति असहमति जनांउदै एमालेकै एक अगुवाले मेयर पदमा बागी उम्मेदबारी घोषणा गरेका छन् । ... बाँकी अंश»
भरतपुरमा ९० मतपत्र च्यातिएका भेटिए, आयोगको निर्णय अन्तिम हुने
२०७४ जेठ १८ बिहिबार, चितवन। भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणनास्थलबाट वडा नम्बर १९को च्यातिएका मतपत्रको संख्या ९० रहेको छ। मतगणनाका दौरान विवाद बढेपछि मतपत्र च्यातिएको थियो। ... बाँकी अंश»
पैसा बाँडेर एमालेले सिट संख्या बढाएको बिजुक्छेंको आरोप
२०७४ जेठ १८ बिहिबार, भक्तपुर। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेंले स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनमा काँग्रेसको तुलनामा एमालेले पैसा बाँडेर आफ्नो सिट संख्या बढाएको आरोप लगाएका छन्। ... बाँकी अंश»
झापाका दुई नगरमा काँग्रेसबाट आमा छोरी उमेद्वार
२०७४ जेठ १८ बिहिबार, झापा। नेपाली काँग्रेस झापामा एउटै पदका लागि आमा छोरी नै उम्मेद्वार बनेर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। दोस्रो चरणमा हुने असार १४ गते हुने निर्वाचनका लागि झापाको दुई तहको उपमेयरमा आमा छोरी उमेद्वार भएका हुन्। ... बाँकी अंश»
आधुनिकतासंगै चुनावी प्रचार शैली बदलियो, अधिकांशको ध्यान प्यारोडी गीतमा
२०७४ जेठ १८ बिहिबार, दमक । अघिल्ला चुनावहरुभन्दा यसपटकको स्थानीय तहको चुनाव फरक देखिँदै गएको छ । चुनावको प्रचारप्रसार शैली नै बदलिँदै गएको छ । ... बाँकी अंश»
भरतपुर महानगर काण्डको प्रतिवेदन आयोगमा : गोप्य राख्ने, एकै पटक निर्णय सुनाउने
२०७४ जेठ १७ बुधबार, काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणनाका क्रममा मतपत्र च्यातिएको विषयलाई लिएर निर्वाचन आयोगले छानविन गर्न गठन गरेको टोलीले आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । ... बाँकी अंश»
एमालेले विहीबार चितवन बन्द गर्ने, त्यसले नपुगे अनसन बस्ने !
२०७४ जेठ १७ बुधबार, काठमाडौं । नेकपा एमालेले बिहीबार चितवन जिल्ला बन्दको आह्वान गरेको छ । भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना रोकिएको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएको एमालेले बिहीबार जिल्ला बन्द आह्वान गरेको जिल्ला अध्यक्ष कृष्णभक्त पोखरेलले जानकारी दिए । ... बाँकी अंश»
राजपाको बन्दका कार्यक्रम स्थगित, चुनावको नयाँ मितिबारे सकारात्मक
२०७४ जेठ १७ बुधबार, काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)नेपालले बिहीबार र शुक्रबारको लागि आह्वान गरेको बन्द फिर्ता लिएको छ । सरकारले जेठ ३१ गते निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका बनाएको समयमा मनोनयनको दिन चुनाव हुने प्रदेशहरुमा आह्वान गरिएको बन्दसहितका कार्यक्रम फिर्ता लिईएको राजपा नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सर्वेन्द्र नाथ शुक्लले जानकारी दिए । ... बाँकी अंश»
देउवाको मन्त्रीमण्डलमा दोहोरिने सम्भावना भएका मन्त्रीहरु
२०७४ जेठ १७ बुधबार, काठमाडौं । नयाँ सरकार गठनको तयारीमा काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा अन्तिम कसरतमा छन्। सहमतीय सरकारको सम्भावना नरहेपछि करिव साँढे ३ सय सांसदको समर्थन सहित देउवा यसै हप्ता प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना रहेको छ । ... बाँकी अंश»